प्रयोगकर्ता-परिभाषित शव्दकोष सूचीमा शव्दकोष चयन गर्नुहोस् , र सम्पादनक्लिक गर्नुहोस्.
यदि सूची खाली छ भने, शव्दकोष सिर्जना गर्नका लागि नयाँक्लिक गर्नुहोस् .
शव्द बाकसमा, शव्द टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँ योजक चिन्हबाट झिक्न चाहनुहुन्छ, समान संकेबाट अनुगमन गरिएको (=), उदाहरणका लागि, "pretentious=".
नयाँ क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि बन्द गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।
योजक चिन्हबाट शव्द द्रुत रूपमा झिक्नका लागि, शव्द चन गर्नुहोस्, ढाँचा - क्यारेक्टररोज्नुहोस् , फन्ट ट्याब क्लिक गर्नुहोस्, र भाषा बाकसमा "कुनै पनि होइन"चयन गर्नुहोस् .